We Fight We Win. -- " More than Media ": ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တည်ရှိရေး ဥပဒေကြောင်းအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကူညီမည်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်နေပြီဆိုရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာ တည်ရှိရမှာဖြစ်လို့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တည်ရှိရေးကို ဥပဒေကြောင်းအရ အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် အမှုဆောင်တွေကို ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
"ပထမဦးဆုံးမှာ သူပြောတဲ့ ဥစ္စာကတော့ ပြည်သူတွေ ခံစားကြုံတွေ့ရတဲ့ ဝေဒနာတွေပေါ့နော်။ ဒုက္ခတွေ၊ ပြဿနာတွေကို ပြောဆိုဆွေးနွေးထားတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကျောင်းသားကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် သူကူညီပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောတယ်။ ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာ တရားဝင် ဖြစ်ပြီးသား ဆိုတာကို သူ့အနေနဲ့လည်း လက်ခံတယ်ပေါ့နော်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဆိုလို့ရှိရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဆိုတာ ရှိကိုရှိရမယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီဥစ္စာတွေကို သူက ဆက်ပြီးကူညီသွားမယ်။ ပိုပြီးတော့ တရားဝင် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖြစ်လာနိုင်အောင်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ အကုန်လုံး က ကျောင်းတက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရအောင် သူ့အနေနဲ့ ဥပဒေအရ ပြန်ပြီးကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ သူကပြောပါတယ်"
ကိုလိုနီခေတ် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ကာလကတည်းက တည်ရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အဆောက်အဦးလည်း ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးခံရ၊ အဖွဲ့တည်ရှိခွင့်လည်း ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပေ မယ့် ခေတ်အဆက်ဆက် ကျောင်းသားတွေက သမဂ္ဂကို လျှို့ဝှက်ဖွဲ့စည်းပြီး လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင် လာရာမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာတကြိမ် ကျောင်းသားထုရှေ့မှာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တည်ရှိခွင့် မရပေ မယ့် ၂၀၀၇ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေက ဆက်လက် ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ အခုအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အောက်မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ ဒေသအလိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တည်ရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြ ပါတယ်။
. Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved..